Lokhu ezingemnandi esehlaselwa isifo sesikhumba esenyanyekayo like induna (hhayi yigama lezokwelapha) Ngokuvamile kuvela umzimba ezindaweni ezingalindelekile, ngezinye izikhathi ngisho esikhumbeni ezinqeni. Kulokhu, bekhulisa eningi kabi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kodwa ikakhulukazi ngesikhathi sasehlobo. Lesi sihloko sichaza indlela balahle nezinduna imbongolo bese ugcine umzimba wakho ukuze alondoloze unaphakade ukubukeka kwalo ephelele.
Izimbangela induna ezinqeni
Ngokungafani nezinye izindawo emzimbeni, isikhumba izibunu cishe elingenalo nezindlala sebaceous. Ngakho-ke, it is Njalo sibhekana ukoma, uhlushwa ukuntuleka kokudla zemvelo, awunazo mpilo nezakhi. Ngaphezu kwalokho, isikhumba akusho ukuphefumula njengoba ngokuvamile ngaphansi izingqimba eziningana izingubo. Permanent ngomshikisho mechanical nokukhama ukukhuthaza nesenzakalo yokucasuka. zangaphansi Zokwenziwa futhi izingubo ewumngcingo kukhona isizathu ukuthi isikhumba coarsens, ikhule ezimbotsheni avimbekile, futhi ukutheleleka okudlulela ngokukhululekile yonkana kobuso izibunu. Enye imbangela induna kungaba nokuntuleka kwenhlanzeko kanye nokuntuleka ukunakekelwa salokhu yingxenye yomzimba.
ukunakekelwa kwesikhumba Proper
Hhayi sokukhathazeka manje mayelana nendlela balahle induna ngupapa, kufanele ngaso sonke isikhathi isikhumba sakho. Ukuze uqale ukukhumbula ukuthi eziyisisekelo isimiso ukunakekelwa izibunu (njengoba ubuso nomzimba) kuyinto njalo. Gqoka ingubo yangaphansi eyenziwe ngokotini. Ezimweni ekhethekile, ungakwazi Yiqiniso, wagqoka lace, kodwa lokhu akufanele wathumba. Ukuthatha eshaweni, ukugeza izibunu zakho. Qinisekisa ukuthi usebenzisa le okwesikhathi washcloth nensipho yezimonyo, kwathi elilodwa noma amabili izikhathi ngesonto - khuhla. Uyosusa amaseli isikhumba esifile ukwenza isikhumba bushelelezi. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukusebenzisa buso ubumba eluhlaza okwesibhakabhaka kwamakhambi hhayi kuphela ebusweni, kodwa futhi imbongolo. Lokhu ngeke nje ukukusindisa induna, kodwa ngeke ukuthuthukisa cellulite. Ngemva okugeza noma eshaweni, qiniseka ukusebenzisa amafutha emzimbeni, ikakhulukazi ezindaweni inkinga. Ngakho isikhumba sakho uyohlale zisesimweni ephelele, futhi uyeke ukucabanga mayelana nendlela balahle induna ngupapa. Khumbula ukuthi kungcono ukuvimbela isifo esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe ke.
Indlela ukwelapha nezinduna imbongolo
Ngenxa yokwethuka ngenxa yokuthi awayona zinkulu. Zonke ezingelapheka, bekuyoba ufisa. Okokuqala, khumbula ukuthi nezinduna ecindezela bengayi. Ungakwazi ukuthwala ukutheleleka, bese zingase zisale esikhumbeni emigodini ejulile nezibazi. Kungcono ukulinda yokuthi bona wavele, futhi kakade ukuqeda imiphumela. ngezandla ezihlanzekile kakhulu, ngobumnene ukusula isikhumba futhi aphathe isilonda necebo magciwane. Ukuqinisekisa ukuthi ketshezi aphume ayizange ufinyelele kwezinye izindawo isikhumba. Lokhu kungabangela ukusabela ukuvuvukala. Musani nezinduna ngotshwala! Kuyinto ngomisa isikhumba, kamuva kuyoba ukuvuvukala entsha. Into Ilungelo lokusebenzisa ukotini swab, pre-oswakanyiswe magciwane.
Kanjani ukuletha nezinduna imbongolo ngosizo bemishini yezokwelapha
Ukuze balahle induna ingelashwa nge sokulungiselela yabo "Baziron". Uwoyela ubulala amagciwane, bome endaweni obukhulu futhi ukuthi kubaluleke kakhulu, it is ngokushesha ugxile. Excellent ejenti eqeda ukuvuvukala futhi uwoyela tea tree. It angasetshenziswa ukwelapha isikhumba ezinqeni.
Manje uyazi mayelana nendlela balahle induna ngupapa. Esimeni nesenzakalo yabo, ungakwazi ukwelapha isikhumba ngokushesha.
Cream babugcwele izisihla - ungumsindisi ubuhle
Emehlweni engemuva: izici nezici kudivayisi